Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Technology » Ukuhamba phambili ngoMhla wokuQala: Ubukrelekrele bokwenziwa bunyani
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukuhamba phambili ngoMhla wokuQala: Ubukrelekrele bokwenziwa bunyani.
I-AI isebenza kuphela xa idatha, kunye neqonga eliyibamba, lilungele injongo yokusebenzisa i-AI ukwakha amava angcono kubahambi.
Usuku lokuvula lokuHamba Phambili lwaqala ngeseshoni enikezelwe kwi-AI ekuhambeni.
Izixhobo zikhona zobuntu obukhulu - kodwa iingqondo kufuneka zitshintshe. Ukwahlula asikokwenziwa komntu.
Ukuba wabelana ngedatha, i-algorithms inokusebenza kuyo yonke imithombo, ukwenziwa komntu siqu kunokuba yintsebenziswano, intsebenziswano.
Abaphathi betekhnoloji abaphezulu abavela kulo lonke ishishini lokuhamba bakholelwa ukuba ubukrelekrele bokulinganisa (AI) iya kudlala indima ebalulekileyo ekuqhubeni ukubuyiswa kohambo ixesha elide njengoko iiseti zengqondo kunye nesimo sengqondo malunga nokutshintsha kokwabelana ngedatha.
Usuku lokuvula iTravel Forward lwaqala ngeseshini enikezelweyo AI ekuhambeni.
UAndy Owen-Jones, i-CEO kunye nomsunguli we-AI-early-adopter bd4travel, uthe i-AI kunye nokufunda ngomatshini yindlela kuphela yeenkampani zokuhamba ukuba "zichaze" oko abahambi babo bafuna.
Nangona kunjalo, ukuya ngaphaya "kwe-avareji" kunye "nobuntu", AI Iingcali zifuna ukufikelela kwidatha
"Izixhobo zikho ukuze umntu abe ngumntu omkhulu - kodwa iingqondo kufuneka zitshintshe. Ukwahlulahlulwa asikokwenza umntu ngamnye. ”
USundar Narasimhan ovela kwaSaber Labs uqaphele ukuba lo mahluko ubonakaliswa kwindlela izicelo zeshishini AI kunye nokufunda koomatshini kuhambo ngoku kubunjineli kwaye kuphuculwe ekuphuculeni amava kubahambi kwaye kude nokwandisa isivuno sababoneleli.
Kwakhona wakhuthaza iingqondo ezintsha malunga nokwabelana ngedatha.
"Ukuba wabelana ngedatha, i-algorithms inokusebenza kuyo yonke imithombo, ukwenza umntu kube yintsebenziswano, intsebenziswano." Wachaza imeko yokusetyenziswa kwixesha elizayo apho i-AI inokubonelela ngamava ohambo apho inqwelomoya kunye nendawo yokuhlala zombini zenziwe zomntu.
Iingqondo, iiparadigms ezintsha kunye nokucinga okutsha ibingumxholo kuzo zonke iiseshini ngokunjalo. UJospeh Ling ovela kwiVouch wachaza ukuba ishishini lakhe kufuneka litshintshe njani ingqondo kwishishini lehotele.
“Kufuneka siqinisekise abanini-hotele ukuba intsebenziswano yabantu ayilingani kuzo zonke iindawo zokuchukumisa. Imveliso yethu inceda abanikazi beehotele ukuba benze imisebenzi emininzi apho kungafunwa mntu, nto leyo ikhulula abasebenzi basehotele ukuba bagxile kwimisebenzi enefuthe elibonakalayo kumava eendwendwe, utshilo.
Olunye ushishino apho iingqondo zifuna ukutshintshwa kukubhabha. Ingxoxo yephaneli emva kwemini yayingathandabuzekiyo kwimbono yayo yokuba ukuphucula ukwabelana kwedatha phakathi kweenqwelo-moya, abaqhubi beenqwelo-moya kunye nokulawulwa kwezithuthi zomoya kunokuphucula iinqwelo-moya kunye neendlela ezisebenzayo, kunye nenzuzo ekhawulezayo yokukhutshwa okuphantsi ngokunciphisa ukutshiswa kwamafutha.
U-Yann Cabaret ovela kwi-SITA uxelele igumbi eligcweleyo ukuba "itekhnoloji yale mihla iyayixhasa intsebenziswano - ngedatha esinayo sinokusebenzisa umatshini wokufunda ukwenza ngcono iintshukumo zenqwelomoya, esibhakabhakeni okanye kwisikhululo seenqwelomoya."
Nangona kunjalo, ukuqwalaselwa kwezorhwebo kunqanda abaninzi abaqhubi becandelo labucala babelana ngedatha omnye nomnye, imeko engahambelani nokulwa nonxunguphalo lwemozulu. “Iinzame zeshishini zinokusebenza kuphela ukuba wonke umntu ungaphakathi,” utshilo.
Umthamo wedatha ecwangcisiweyo kunye nengacwangciswanga ngaphakathi kwishishini lokuhamba lidala indawo efanelekileyo yobukrelekrele bokwenziwa ukuvelisa iimveliso ezintsha, amava angcono kubahambi kunye neengeniso ezininzi kwiinkampani zokuhamba. Nangona kunjalo, isiphumo soku kukuba umthamo wedatha uthetha ukuba iifemu kufuneka zicinge malunga nokuqinisekisa idatha ngaphambi kokuyisebenzisa.
I-Manual Hilty evela kwingcali yezobugcisa bokucwangcisa uhambo lweentsuku ezininzi uNezasa uthe ishishini lakhe beliphuhlisa iqonga lalo ukuze likwazi ukuxhasa uhlalutyo lwedatha kunye ne-AI kwisikali kwaye isebenzise ukuqonda kwinqanaba lomntu.
"Ukucwangcisa, ukubhukisha kunye nokuzalisekisa ukhenketho lweentsuku ezininzi kuneendawo ezininzi zokuchukumisa indawo nganye enobunzima bayo," utshilo. "Siyazi ukuba i-AI isebenza kuphela xa idatha, kunye neqonga eliyibamba, lilungele injongo yokusebenzisa i-AI ukwakha amava angcono kubahambi".